मुलुककै उत्कृष्ट सहरमध्ये एक बनाउनेछु - कुराकानी - साप्ताहिक
ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर हुन्– गजेन्द्र महर्जन । २०४७ देखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका महर्जनले पाटन क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । ४१ वर्षीय महर्जन किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् । महर्जनका बुवा वनस्पति विभागका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् भने आमा गृहणी ।
तपाईंको प्राथमिकता के हुनेछ ?
ढुंगा र बालुवाखानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु मेरो पहिलो लक्ष्य हो । मापदण्डविपरीत सञ्चालित लेले तथा नल्लुकाखानीहरूलाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । उद्योग क्षेत्र स्थापना, भूकम्पपीडितको पुन: लगत संकलन, दोस्रो किस्ता वितरण, नक्सापासमा मिनाहालगायतका काम अघि बढाइनेछ । दुर्गम पहाडी भेग देवीचौरमा सहज यातायात, गोदावरी–चापागाउँ–छम्पी जोड्ने नगर सडक, नख्खु करिडोरलाई कान्तिराजमार्गसँग जोड्दै सबै वडालाई कालोपत्रे सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ । नगरमा सिटी बस सञ्चालन हुनेछ । यो नगरलाई प्लास्टिक तथा फोहोरमुक्त बनाइनेछ । चापागाउँ, गोदावरी र छम्पीमा अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कामहरू हुनेछन् ।
कस्तो नगरको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
लेलेलाई छुट्टै उपत्यका सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । गोदावरी, गोदामचौर, विंशखुनारायण, झरुवारासी, छम्पी आदिलाई पर्यकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेछु । देवीचौरमा हिमश्रृंखला, फास्ट ट्रयाक, दक्षिणकाली र लेले बस्ती अवलोकन गर्न भ्यु टावर अदि निर्माण गरिनेछ भने ठैब, ठेचो, चापागाउँ जस्ता मल्लकालीन बस्तीमा नेवारी वास्तुकलामा आधारित पुरना घरहरू पुनर्निर्माण गरिनेछ । बाग्मती सभ्यतासँगै विकास भएको डुकुछाप बस्तीलाई पौराणिक पुरात्तत्व बस्ती रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ ।
नगरका प्रमुख स्रोत के–के हुन् ?
नगरको प्रमुख स्रोत खानी नै हो । केन्द्रीय बजेटबाहेक खानी एवं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ । फोहोरलाई मोहर बनाउन योजना अघि बढाइनेछ । स्थानीय हस्तकलालाई प्रवद्र्धन गरी आम्दानी गर्ने योजनाहरू बनाइनेछ । सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती तथा आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बज्रबाराही तथा सन्तानेश्वर वनलाई चराचुरङ्गी संरक्षण पार्क बनाई आम्दानी लिन सकिन्छ । नेवारी बस्तीभित्र रहेका पोखरीहरूको व्यवस्थापन गरी माछा पालन गर्न सकिन्छ ।
मनपर्ने दश उत्कृष्ट गीत